DEG DEG: Rasaas Xoogan oo laga maqlaayo Magaalada Laas-Caanood iyo Ciidanka Soomaliland oo laga saaray Magaalada…+Sawirro | Kismaayo24 News Agency
Sunday September 4, 2016 - 12:29 under Somali News by Tifaftiraha K24
Wararka aynu hada a Heleyno Magaalada laas-caanood ee Gobolka sool ayaa waxa ay sheegayan in Rasaas xoogan ay hada ka socoto qeybo ka mid ah Magaalada .
Dagaalkii saakay ka Bilowday Gudaha Magaalada waxaana uu u dhaxeeya Ciidamada Maamulka Soomaliland iyo Shacab Hubeysan waxaana ilaa hada socota Rasaas xoogan waxaana rasaastu ay ka dhaceysaa Saldhiga Dhexe, Bangiga guud, Taliska Qeybta iyo goobo kale oo muhiim ah.
Dagaalka ayaa la sheegay in uu yimid ka gadaal markii ciidanka soomaliland ay dil u geysteen sida la sheegay mid ka mid ah dadka ku nool Laas-Caanood.
iidanka Somaliland ayaa ka baxay meelo kamid ah magaalada Laascaanood, qaarkood waxay u baxeen dhinaca magaalada Burco, iyadoo ciidan kale oo kusugnaa Kontoralka xiga dhinaca Waqooyiga ay hadda u gurteen dhinaca magaalada.
Kooxo Hubeysan oo Caro xoogan ay ka Muuqato ayaa hada magaalada ku sugan waxaana warar madax banaan oo k24 ay heshay sheegayan in Guryo ay dagnaayeeen Masuuliyiin ka mid ah Soomaliland hada laga maqlaayo Rasaas xoogan iyadoona aan la ogeyn rasaasta iyo cida ay u dhaxeyso.
Laas-caanood waxaa dagan shacab aad u dhaliilsan maamulka soomaliland waxaana maalimihii ugu dambeeyay ka taagneyd xiisad culus .
La soco wixii ku soo kordha insha allah